Igumbi eliphindwe kabini - 12 min ukuya embindini weZagreb
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLovrek
Amagumbi eLondon akufutshane nesikhululo seenqwelomoya, izithuthi zikawonke-wonke, umbindi wesixeko, kunye nobomi basebusuku. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yendawo kunye nabantu. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, abahambi beshishini, iintsapho (kunye nabantwana), kunye namaqela amakhulu.
Ihlaziywe ngokupheleleyo, eli gumbi lixhotyiswe nge-TV yesikrini esisicaba kunye neziteshi zesathelayithi, ukufikelela kwi-Wi-Fi yasimahla, imeko yomoya, igumbi lokuhlambela labucala elinendlu yangasese kunye nezindlu zangasese zasimahla.
Ihlaziywe ngokupheleleyo, eli gumbi lixhotyiswe nge-TV yesikrini esisicaba kunye n…
Eyona propati yexabiso eVelika Gorica ngaloo mali. Ufumana ngaphezulu ngemali yakho xa uthelekisa nezinye iipropathi kwesi sixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Lovrek
Ndiza kudibana nawe phambi kweflethi, okanye ndikulande kwisikhululo seenqwelomoya nanini na kufuneka. Ndiyafumaneka kwiselula okanye ngeposi ngayo nayiphi na imibuzo eyongezelelekileyo.